Inqubomgomo yamakhukhi ›Ibhulogi de Juan Herranz
Ngokuthobelana nezinhlinzeko ze-athikili 22.2 yoMthetho 34/2002, wangomhla ziyi-11 kuJulayi, Ezinsizeni Zenhlangano Yezolwazi Nezohwebo Nge-elekthronikhi, Umnikazi ukwazisa ukuthi le webhusayithi isebenzisa amakhukhi, kanye nenqubomgomo yawo yokuqoqwa kanye nokuphathwa kwawo. .
2. Ayini amakhukhi?
Ikhukhi ifayela elincane elilula elithunyelwa kanye namakhasi ale webhusayithi nokuthi isiphequluli sakho Ikhukhi ifayela elidawunilodelwe kukhompuyutha yakho uma ufaka amakhasi athile ewebhu. Amakhukhi avumela ikhasi lewebhu, phakathi kwezinye izinto, ukuthi ligcine futhi libuyise ulwazi mayelana nemikhuba yakho yokuphequlula futhi, kuye ngolwazi aluqukethe kanye nendlela osebenzisa ngayo okokusebenza kwakho, angasetshenziswa ukukuhlonza.
3. Izinhlobo zamakhukhi ezisetshenzisiwe
Isayithi elithi www.juanherranz.com lisebenzisa lezi zinhlobo zamakhukhi ezilandelayo:
Amakhukhi wokuhlaziya: Yilezo, eziphathwe kahle yiwebhusayithi noma ngabantu besithathu, ezivumela inani labasebenzisi ukuthi zilinganiswe futhi ngaleyo ndlela zenze ukukalwa kwezibalo kanye nokuhlaziywa kokusetshenziswa okwenziwe abasebenzisi bewebhusayithi. Ngalokhu, ukuzulazula okwenzayo kule webhusayithi kuyahlaziywa ukuze kuthuthukiswe.
Amakhukhi avela eceleni: Le webhusayithi isebenzisa izinsiza ze-Google Adsense ezingafaka amakhukhi anezinjongo zokukhangisa.
4. Ukwenza kusebenze, kungasebenzi futhi kuqedwe amakhukhi
Ungamukela, uvimbe noma ususe amakhukhi afakwe kukhompyutha yakho ngokumisa izinketho zesiphequluli sakho. Kuzixhumanisi ezilandelayo uzothola imiyalelo yokuvumela noma ukukhubaza amakhukhi kuziphequluli ezivame kakhulu.
i-Google Chrome: LAPHA
5. Isexwayiso mayelana nokususa amakhukhi
Ungasusa futhi uvimbele amakhukhisi kule webhusayithi, kodwa ingxenye yesayithi ngeke isebenze kahle noma izinga layo lingathinteka.
6. Imininingwane yokuxhumana
Ngemibuzo kanye/noma ukuphawula mayelana nenqubomgomo yethu yamakhukhi, sicela usithinte: